Workingrụ ọrụ na Presto Automation abụghị naanị ọrụ, ọ bụ ezigbo ọrụ.
Omenala dị na Presto Automation bụ ihe ọhụrụ na nkwado. Ọhụrụ - n'ihi na anyị na-enye ngwa ọrụ kachasị mma yana teknụzụ kachasị ọhụrụ na ụlọ ọrụ ahụ iji kwado mmepe na mmepe gị. Na-akwado - n'ihi na ịrụ ọrụ na Presto Automation na-enye gị ohere idozi ọrụ gị na ndụ ụlọ gị.
Anyị na-emepụta ma na-azụlite usoro nrụpụta ụwa na Presto Automation n'ihi na anyị nwere nnukwu mmadụ na-eme ka ihe niile na-eme. Plus, anyị oge a, dị ọcha, na oru oma akụrụngwa na-a karịa ihe mmadụ na-atụ anya na n'ichepụta gburugburu ebe obibi.
Na-eche echiche banyere ọrụ ị ga-arụ na mpaghara nrụpụta? Biko were obere oge lelee ndepụta anyị nke ọnọdụ dị n'okpuru, wee nweere onwe gị itinye akwụkwọ ma ọ bụrụ na ị chere na ị zutere ihe ndị achọrọ maka ọrụ ahụ.
Presto akpaaka bụ Ohere Ohere O were n'ọrụ, àjà ịkwụ ụgwọ ịsọ mpi, ọrụ kwụsiri ike, uru, na nnweta mkpuchi mmekọrịta maka ezigbo nwa akwukwo.
Injinia Njikwa Injin
Aha Ụlọ Ọrụ: Presto akpaaka
Typedị Job: Oge niile
Ọnọdụ a bụ ọrụ maka inye nkwado ọrụ aka na usoro nrụpụta anyị site na idozi nsogbu na ndozi nrụzi. Usoro iji tinye ma na ọnweghị oke na sistemụ kpo oku, igwe nrụpụta, akụrụngwa mgbatị dị ala & usoro oven. Usoro ga-agụnye hydraulics, pneumatics, sistemụ ụgbọ ala, yana ihe eletriki isi. Ọzọkwa, ọnọdụ a ga-abụ ọrụ maka ịrụ obere mmezi na ebu nkedo ebu na akụrụngwa. Ọ ga-adị mkpa ịgụ ma ghọta ụkpụrụ, ntuziaka, na nkọwapụta injinia metụtara ọrụ na arụmọrụ nke sistemu ọ bụla.
Ọrụ na Ọrụ:
Gụọ, ghọta ma soro nbipụta injinịa, yana dọkụmentị iji mezuo ọgbakọ ahụ, mmezi ma ọ bụ mezie akụkụ na akụrụngwa
Nwee amamihe na nka iji chekwaa ma mezie ngwa ọrụ yana akụrụngwa akụrụngwa n'ime nkọwapụta
● Debe ma mezie ihe ndị dị ka hydraulics, pneumatics, usoro a na-achịkwa motọ, na isi ihe eletriki.
● Nwalee na dozie igwe iji hụ na ịrụ ọrụ kwesịrị ekwesị
Nyere aka n'ịnọgide na-enwe afọ ojuju nke ịdị mma na arụmọrụ na ngwa ndị mepụtara
● Mee oru ndi ozo dika enyere gi aka
● A na-enweta ya ma a gbasaa elekere ma mgbe awa gachara
Nka & chọrọ:
Ezi àgwà na otu onye egwuregwu
● 3-5 afọ ndị na-adịbeghị anya na nlekọta na ndozi nke akụrụngwa na igwe na igwe na ngwa igwe
Ahụmahụ na isi igwe mgbakọ, igwe tooling melite na nchọpụta nsogbu
Ihe omuma banyere ihe ndi ozo nke eji ihe igwe, ihe eji egwu egwu, ndi mmadu na ndi ozo, wdg.
● Ikike iji gụọ ma kọwaa mbipụta na-acha anụnụ anụnụ, atụmatụ na ihe osise injinịa
● Ihe omuma nke hydraulics, pneumatics ebu igwe oru oru na ihe eletriki akụrụngwa
● Ga-enwe ngwaọrụ nke aka ya
● Nwee ike ịrụ ọrụ na ebe a na-emepụta ihe na mgbakọ
Standing Iguzo ọtọ oge, ibuli elu, na ije ije n'ọtụtụ ọnọdụ ihu igwe, oyi na-ekpo ọkụ.
Ihe omuma di iche, ikikere, asambodo, wdg.
GED ma ọ bụ diploma nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị chọrọ
Mmecha mmemme ọrụ ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ azụmaahịa na teknụzụ igwe ma ọ bụ ndị yiri ya
Iva Otu ngụkọta mmụta na ahụmịhe
Banyere Presto akpaaka
● Anyị bụ Onye Ohere Ohere Ohere (EOE)
● Anyị chọrọ nnwale ọhụụ Ọgwụ na mmanya na-aba n'anya
● Anyị na-achọ tupu ọrụ na azụ ala ndenye ego
Compensation compensationgba ụgwọ mgba, ọrụ na uru
Presto Automation na-achọ Ọdụdọ Njikwa ẹkesikpede, maka maka iwu na-emepe emepe akara usoro nakwa dị ka ịnọgide na-enwe / nchọpụta nsogbu multi-slide mmepụta na nzukọ akụrụngwa.
Nke a bụ ọnọdụ ngbanwe abalị - ụbọchị 5, MF, elekere Nightshift iji kpebie.
Mee ma zụlite akụrụngwa akpaaka dị iche na mgbagwoju anya
● Nọgide na-arụ ọrụ nchekwa na akụrụngwa ọhụrụ na nke ugbu a
● iliarmara usoro mmemme mmegharị na mmepe HMI
Troubles Nchọpụta nsogbu eletrik
Iring Nweta nkà
● Nwee ikike ịgbaso na ịgụ usoro eletrik
● Ihe omuma nke uzo ato, ugbua ihe ntughari, na njikwa
Ihe omuma nke igwe servo na moto steppers
● Ọkpụkpụ eletriki na ụlọ nke usoro nchịkwa akpaaka
● Ihe omuma nke ihe igwe magnet, ultrasonic, capacitive, na fiber optic
● Ihe omuma nke njikwa nchekwa tinyere ákwà ngebichi na uzo uzo laser
Nwee ike idozi igwe na akpaghị aka sistemụ
Ihe omuma banyere mmemme PLC
Ihe omuma nke mmemme HMI
● Ihe omuma nke imeputa ECAD
Understanding Nghọta nkenke nke pneumatics na hydraulics
● Afọ 5 'ọhụụ na-adịbeghị anya na Ọdụdọ na-achịkwa mmepe / mmemme / ụlọ
Nwee ike ịrụ ọrụ na ngalaba mgbakọ
Standing Iguzo ọtọ, ibuli elu, na ije mgbe mgbe
BS na Igwe Ngwá Ọrụ ma ọ bụ ogo ọzọ metụtara
● Anyị na-achọ tupu ọrụ na nyocha ndabere
Compensation compensationgba ụgwọ iji rụ ọrụ ego, nweta ọrụ yana uru